समालोचक पेम्पा तामाङको नयाँ समालोचना कृति ‘विचार अनि विवेचना’ विमोचन - खबरम्यागजिन
Homeखबरसमालोचक पेम्पा तामाङको नयाँ समालोचना कृति ‘विचार अनि विवेचना’ विमोचन
December 21, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर, सिक्किम 0
गान्तोक, 21 दिसम्बर । सिक्किमका वपिष्ठ समालोचक पेम्पा तामाङको समालोचनात्मक लेख सङ्ग्रह ‘विचार अनि विवेचना’ को लोकार्पण गान्तोकमा भयो। रचना बुक्समा आयोजित कार्यक्रममा कवि मनप्रसाद सुब्बा, साहित्यकार केएन शर्मा, नेपाली साहित्य परिषदका अध्यक्ष रूद्र पौड़्याल, अनुवादक सीपी गिरी, वास्तुकार किरण रसाइली, सिक्किम अकादमीका अध्यक्ष एसआर सुब्बा र साहित्यकार प्रध्युम्न श्रेष्ठको संयुक्त बाहुलीबाट विमोचन भयो। समाचोक तामाङको यो चौथो कृति हो। यसअघि उनको दुईवटा समालोचना कृति सार्वजनिक भइसकेको छ।
विमोचन कार्यक्रमको आयोजन चिया कविताले गरेको थियो। यसबीच आफ्नो छोटो सम्बोधनमा कवि मनप्रसाद सुब्बाले भने-कुनै पनि कृतिमाथि समालोचकले गरेको समालोचना अन्तिम हुँदैन। समालोचकको दृष्टिकोणमा नआए राम्रा कृतिहरू पनि ओझेलमा पर्न सक्ने भनाइ सुब्बाको थियो। उनले भने-भारतीय नेपाला समालोचना विधामा समालोचक पेम्पा तामाङले अन्यले आँट नगरेका विषय़लाई अघि ल्याउने काम गरेका छन्। यसअन्तर्गत एलबी बस्नेत, डा. शोभाकान्ति थेगिम अनि पवन चामलिङ किरणका व्यक्तित्व र कृतित्वलाई प्रकाशमा ल्याउनु उल्लेखनीय कदम हो-उनले भने।
कार्यक्रमको अर्को आकर्षण विमोचित कृतिमाथि प्रा. टीबी छेत्रीको कार्य पत्र रहेको थियो। उनले उल्लेख गरेअनुसार पेम्पा तामाङले आफ्नो समालोचनालाई स्वतन्त्रता दिएका छन्। जसले गर्दा कृतिमाथिको हेराइले व्यापकता पाएको छ। विमोचित कृतिले नारीवादलाई अधिक प्रमुखता दिएको उल्लेख प्रा. छेत्रीले गरे। विगत तीस वर्षदेखि समालोचना विधामाथि सक्रिय समालोचक तामाङभित्र अझ धेरै काम गर्ने क्षमता रहेको र यसलाई अग्रता दिनुपर्ने कुरामा जोर दिए। तामाङले नारीवादमाथि अलग्गै कृति तयार पार्न सक्ने संकेत विमोचित कृतिबाट स्पष्ट भएको छ-उनले भने। अर्कोतिर छेत्रीले समालोचकहरूले साहित्यमा देखा परेको अराजगतालाई टुङ्गो लाउन सक्ने उल्लेख पनि गरे।
यसका साथै स्थानीय कृतिहरूमाथि समालोचना गरे त्यसले सर्जकहरूलाई प्रेरित पार्ने बताए। स्वागत मन्तव्यसंगै कृतिमाथि बोल्दै पेम्पा तामाङले भने-2005 यता विभिन्न परिस्थिति र परिवेशमा तयार पारेका रचनाहरूलाई कृतिमा समावेश गरिएको छ। कार्यक्रममा भीम राउत, राम फिर्के र मातृका शर्माले व्यंग्य कविता प्रस्तुत गरेका थिए।